हिमापातसँगै हिमाली भेगका मानिसहरु पहाड र तराई झर्ने तयारीमा - नेपालबहस
हिमापातसँगै हिमाली भेगका मानिसहरु पहाड र तराई झर्ने तयारीमा
| १६:१७:०९ मा प्रकाशित
२ मंसिर, दार्चुला । दार्चुलाको व्यासमा गत आइतबार राति र सोमबार हिमपात भएको छ । हिमपात भएसँगै व्यासको छाङ्रु र तिङ्कर क्षेत्रमा एकाएक चिसो बढेको छ । ती क्षेत्रमा पाँच, छ इन्च हिउँ जमेको छ । ती क्षेत्रका डाँडाकाँडामा अत्यधिक हिउँ समेत परेको छ ।
चिसो बढेसँगै तिङ्करकवासी बुधबार खलङ्गा झर्दैछन् । गाउँमा चिसो ह्वात्तै बढेपछि भारतको बाटो हुँदै सौका समुदायको बसाइसराइ कुञ्चा खलङ्गा झर्न लागेका हुन् । छाङ्रुको कुञ्चा भने यही मङ्सिर १९ गते मात्रै झर्ने तयारी भएको स्थानीयवासी बोहराले बताए ।
जिल्लाका व्यासी, सौका समुदाय सदरमुकाम खलङ्गा झर्ने तयारी गर्दैछन् । उनीहरु नेपाली भूमि होइन कि भारतीय बाटो भएर सदरमुकाम झर्ने तयारी गरेका हुन् ।
गत चैतदेखि नेपाल भारत सीमा नाका बन्द छ । व्यासीहरु आफ्नै भूमि भएर खलङ्गा आउन सक्ने अवस्था नरहेपछि भारतीय बाटो भएर खलङ्गा झर्ने तयारी भएको व्यास गाउँपालिका–१ का वडासचिव विनोद बुढाथोकीले जानकारी दिए ।
गत जेठमा पनि व्यासीहरु भारतीय भूमि प्रयोग गरेर छाङ्रु तिङ्कर उक्लिएका थिए । सरकारले व्यासीवासीलाई आफ्नै भूमि भएर आवतजावत गर्न बाटो बनाउन नसकेपछि उनीहरुले पुनःविदेशी भूमिको प्रयोग गर्नुपरेको हो । सरकारले व्यासको छाङ्रु तिङ्करका नागरिकलाई आफ्नो भूमि मार्फत आवतजावत गराउन घाँटीबगरको ५५० मिटर घोडेटो बाटो निर्माण ग¥योे ।
सोे स्थानमा बाटो बनेपनि त्यो भन्दा अप्ठ्यारो ठाउँ रहेको तम्बाकु भीरमा बाटो बन्न सकेको छैन । स्थानीयवासीले अहिले पनि भारतीय बाटो प्रयोग गर्नुपरेको सचिव बुढाथोकीले बताए ।
गत जेठ महिनामा व्यास उक्लिएका सौका समुदायका ६० परिवार पशु चौपायासहित यही मङ्सिर ३ गते औल अर्थात खलङ्गा झर्दैैछन् । उनीहरु मङ्सिर ८ गते मात्रै खलङ्गा पुग्नेछन् । यस्तै १०५ परिवार मङ्सिर १९ गते व्यासबाट हिँड्ने तयारी गरेको जनाइएको छ ।
व्यासीहरु छाङ्रुको गागाबाट सीता पुल पार गरेर खलङ्गा आउने छन् । भारतीय बाटो हुँदै खलङ्गासम्म पुग्दा पनि यात्रा भने त्यति सजिलो हुँदैन् । आफ्नो भूमि भएर बाटो नै बनाउन नसकेपछि स्थानीयवासीले फेरि पनि भारतलाई नै आग्रह गर्नुपरेको व्यासी बताउँछन् ।
उनीहरु छाङ्रुबाट पहिलो दिन गव्र्याङ, दोस्रो दिन लामारी, तेस्रो दिन निजाङ, चौथो दिन गर्वाधार, पाँचौ दिन एलागाड हुँदै छैठाँैं दिनमा सदरमुकाम खलङ्गा पुग्नेछन् । व्यासीको बसाइसराइलाई स्थानीय भाषामा कुञ्चा भनिन्छ ।
खेतीपाती लगाएर आएका व्यासी पुनः वैशाख, जेठमा खेतीपाती भित्र्याउन उक्लन्छन् । स्थानीय वर्षको एक पटक उवा, नप्पल, तिते फाँपर, पल्ती र आलु जस्ता बाली लगाउने गर्छन् । यस क्षेत्रमा बसोबास गर्ने स्थानीयको मुख्य पेशा कृषि र व्यापार हो । व्यासको छाङ्रु र तिङ्करमा मात्रै झण्डै हजार बढी मानिसको बसोबास छ ।
परापूर्वकालदेखि नै व्यासीहरुको दोहोरो बसाइ हुँदैआएको छ । उनीहरुको घर, जग्गा जमीन सदरमुकाम खलङ्गामा समेत छ । उनीहरुले व्यासको छाङ्रु, तिङ्कर जस्तै खलङ्गामा तिङ्कर छाङ्रुको बसाइँ छुट्टाछट्टै बसालेका छन् ।
आज कोरोनाले थप १२ संक्रमितको मृत्यु ४ मिनेट पहिले
छोरीलाई पटकपटक बलात्कार गर्ने बाबु प्रहरी खोरमा १० मिनेट पहिले
प्याराग्लाइङि दुर्घटनाले आकाशमा उड्न चाहानेहरुलाई त्रसित ४१ मिनेट पहिले
फाइभजी सेवाका लागि फ्रिक्वेन्सी निर्धारण गर्ने तयारी १४ घण्टा पहिले
सरकारबाट विज्ञापन बोर्ड गठनः पाँच सदस्य नियुक्त ६ घण्टा पहिले
कसले जित्ला ! उद्योग वाणिज्य महासंघको चुनाव ? ३ दिन पहिले
प्राधिकरणले पुनःस्थापना र पुन : निर्माणमा उपलब्धिबारे सेमिनार गर्ने ४ दिन पहिले
ब्राउनसुगरसहित भारत विहारका दुई जना पक्राउ १ दिन पहिले
चलचित्रमा नयाँनयाँ क्षेत्रमा ‘लोकसन’ खोज्ने र समावेश गर्ने दर बढ्याे १५ घण्टा पहिले
कार्तिक नाच प्रस्तुत गर्दै कलाकार २ दिन पहिले
नेपाल–भारत सीमा जोड्ने झोलङ्गे पुल दुई दिन खुल्ने ४ दिन पहिले
कोरोनाले गाविस अध्यक्षको मृत्यु २ हप्ता पहिले
चितुवाकाे आक्रमणबाट बालकको मृत्यु ३ हप्ता पहिले
अमेरिकी राष्ट्रपतिको चुनाव : बाइडेनको अग्रता कायमै ४ हप्ता पहिले
म्यानपावर कम्पनीमा छापा हान्दा भेटियो कुटनीतिक नियोगको गाडी ६ दिन पहिले
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले गोहीसँगै कछुवा पनि हुर्काउँदै २ महिना पहिले
दक्षिणी त्रिपोलीमा तीन हवाई आक्रमण, दुई पक्षबीच सशस्त्र द्वन्द्व जारी १ वर्ष पहिले
राजविराजमा खाना पकाउने ग्यासको अभाव, उपभोक्ता मारमा ८ महिना पहिले
अमेरिकामा कार्यालयहरु खुला गर्न नयाँ निर्देशिका जारी ६ महिना पहिले